Gadzira Organic Fertilizer Kumba
Nzira yekugadzira manyowa?
Organic tsvina manyowa inodikanwa uye isingadzivisike kana dzimba dzichigadzira yako fetiraiza pamba. Kuisa mupfudze inzira inoshanda uye ine hupfumi mukutarisira marara emombe. Kune maviri marudzi enzira dzekuisa manyowa anowanikwa mukugadzira fetereza maitiro.
Tembiricha yehuwandu hwembundira iri pasi pe50 ℃, iine nguva yakareba yekugadzira manyowa, kazhinji mwedzi mishanu kusvika mishanu.
Kune matatu anounganidza mhando: flat mhando, semi-gomba mhando, uye gomba mhando.
Flat Rudzi: inokodzera nzvimbo dzine tembiricha yakakwira, kunaya kukuru kwemvura, hunyoro hwakakwira, uye yakadzika-pasi pevhu-mvura nhanho. Kusarudza yakaoma, yakavhurika ivhu padhuze nemvura & nyore kutakura. Hupamhi hwesiteki ndeye 2m, kukwirira kuri 1.5-2m, kureba kuchinjika neakasvibirira huwandu hwehuwandu. Kumhanyisa pasi ivhu usati warongedza uye kufukidza yega yega nhumbi yezvinhu nechuru chehuswa kana turfs yekumwa oozed muto. Ukobvu hwese nhete ndi15-24cm. Kuwedzera huwandu hwakaringana hwemvura, lime, sludge, husiku husiku nezvimwewo pakati peimwe nhete kudzikira kubuda kwemhepo uye ammonia volatilization. Kutyaira wega-inofambiswa compost Turner (mumwe weakakosha composting muchina) kushandura iyo stack mushure memwedzi mumwe kurongedzwa, zvichingodaro, kusvikira pakupedzisira zvigadzirwa zvoora. Kuwedzera huwandu hwakaringana hwemvura zvinoenderana nehunyoro kana kuoma kwevhu. Iyo composting rate inosiyana nemwaka, kazhinji mwedzi miviri muzhizha, 3-4 mwedzi muchando.
Semi-gomba Rudzi: inowanzo shandiswa kutanga kwematsutso nechando. Kusarudza nzvimbo ine zuva uye lee kuchera gomba rine hudzamu hwemamita maviri kusvika mashanu, upamhi hwamamita mashanu kusvika matanhatu, uye kureba kwemamita masere kusvika gumi nemasere. Pazasi uye madziro egomba, panofanirwa kuve nemipaseji yemhepo yakavakwa muchimiro chemuchinjikwa. Musoro we compost unofanirwa kuvharwa zvakanaka nepasi mushure mekuwedzera chiuru chematsi dzakaoma. Tembiricha inomuka mushure mesvondo rimwechete. Uchishandisa groove mhando manyowa tuner kushandura iyo yekuvirisa murwi zvakaenzana mushure mekushisa kwekudzikira kwemazuva mashanu kusvika mashanu, wobva waramba uchirongedza kusvikira pakupedzisira mbishi zvigadzirwa zvaora.
Gomba Rudzi: 2m kudzika. Inonziwo yepasi pevhu mhando. Stack nzira yakafanana neiyo semi-pit mhando. Munguva ye kuora maitiro, double helix compost Turner inoiswa kuti ishandise iyo yekutaurirana iri nani nemhepo.
Thermophilic composting inzira huru yekurapa zvisineyi zvinhu zvehupenyu, kunyanya marara evanhu. Zvinhu zvinokuvadza, senge utachiona, mazai, mbeu yehuswa nezvimwe mumashanga uye kubuda, zvichaparadzwa mushure mekurapa kwekushisa kwakanyanya. Kune maviri marudzi enzira dzekuisa manyowa, mhando yakati sandara uye semi-gomba mhando. Iwo matekinoroji akafanana neakajairika manyowa. Nekudaro, kuti ikurumidze kuora kwemashanga, thermophilic composting inofanirwa kupinza yakanyanya tembiricha cellulose kuora mabhakitiriya, uye kumisikidza aeration michina. Matanho echando-chiratidzo anofanirwa kuitwa munzvimbo dzinotonhora. Yakakwira tembiricha kompositi inopfuura nematanho akati wandei: Fivha-Yakanyanya Kutonhora-Kupisa Kudonha-Kuora. Mune tembiricha yakakwira, zvinhu zvinokuvadza zvichaparadzwa.
Raw Zvishandiso zveHomemade Organic Fertilizer
Isu tinopa zano kuti vatengi vedu vasarudze aya anotevera mhando kuti vave ako mbishi zvigadzirwa zvemumba zvakagadzirwa manyowa.
1. Dyara Mbishi Zvishandiso
1.1 Mashizha Awa
Mumaguta makuru mazhinji, hurumende dzakabhadhara mari yevashandi kuti vatore mashizha akadonha. Mushure mekunge kompositi yakura, inozopa kana kutengesa kune anogara nemutengo wakaderera. Zvingave zvakanaka pasi kumusoro masentimita makumi mana kunze kwekunge kuri munzvimbo dzinopisa. Iyo murwi wakakamurwa kuita akati wandei anotsiyana akaturikidzana emashizha uye ivhu kubva pasi kusvika kumusoro. Muchikamu chega chega mashizha akadonha aive nani asingasviki 5-10 cm. Iyo yekuvhara nguva pakati pemashizha akadonha uye ivhu inoda inosvika mwedzi mitanhatu kusvika gumi nemiviri kuti iore. Chengetedza hunyoro hwevhu, asi usanyanya-kudiridza kudzivirira kurasikirwa kweiyo ivhu zvinovaka muviri. Zvingave zvakanaka kana iwe uine chaiyo simende kana mataira manyowa edziva.
Main zvinoriumba: senitrogen
Sekondari zvikamu: phosphorus, potasium, simbi
Inonyanya kushandiswa kune nitrogen fetiraiza, yakadzika kuisa pfungwa uye haisi nyore kukuvadza mudzi. Haifanire kushandisa zvakanyanya mumaruva anotakura michero. Nekuti maruva nemichero zvinoda huwandu hwephosphorus potassium sulphur.
Kana ukashandisa muchero wakaora, mhodzi, jasi rembeu, maruva nezvimwewo, iyo nguva yakaora ingangoda nguva yakati rebei. Asi zvirimo phosphorus, potasium nesarufa zvakakwirira zvakanyanya.
1.3 Keke rebhinzi, tsanga dzembesa uye nezvimwe.
Zvinoenderana nemamiriro ekudzikira, manyowa akakura anoda mwedzi mitatu kusvika kumitanhatu. Uye nzira yakanakisa yekumhanyisa kukura ndeyekuvhara mabhakitiriya. Chiyero che compost chakazara pasina hwema hwekunhuhwirira.
Izvo zvirimo phosphorus potasium sarufa zvakakwirira kupfuura marara manyowa, asi zvakaderera kune muchero manyowa. Shandisa ma soya kana zvigadzirwa zve bhinzi kugadzira manyowa zvakananga. Nekuti ivhu remukati mesoya rakakwirira, nekudaro, iyo yekudzosera nguva yakanyarara kureba. Kune anowanzo farira, kana pasina maruva akakodzera, ichine hwema hwakaipa mushure megore rimwe kana makore akati wandei gare gare. Naizvozvo, tinokurudzira kuti, yakabika soya zvakanyatsonaka, yakapiswa, uyezve kudzokazve. Nekudaro, inogona kudzora zvakanyanya nguva yekudzosa.
2. Mhuka Yemhuka
Tsvina yemhuka dzinodya dzimwe mhuka, dzakadai semakwai nemombe, dzakakodzera kuviriswa gadzira bio fotereza. Kunze kwezvo, nekuda kwehuwandu hwephosphorus zvemukati, huku yehuku uye hangaiwa yenjiva zvakare sarudzo yakanaka.
Cherekedza: Kana ichitarisirwa uye ichishandiswazve mufekitori yakajairwa, tsvina yevanhu zvakare inogona kushandiswa senge mbishi zvigadzirwa zve fetiraiza. Dzimba, zvisinei, kushomeka kwemidziyo yekugadzirisa yepamusoro, saka hatikurudzire kusarudza tsvina yevanhu sezvinhu zvakagadzirwa panguva yekugadzira yako fetiraiza.
3. Natural Organic Fertilizer / Nutritional Ivhu
☆ Padzi sludge
Hunhu: Yakaorera, asi yakakwira mu viscosity. Inofanirwa kushandiswa seyakagadzika fetiraiza, isina kukodzera kuti ishandiswe yega.
SaTaxodium distichum, ine yakaderera resin yezviri mukati, ichave iri nani.
Zvimwe zvinobudirira. Haifanire kushandiswa yakananga uye inogona kusanganiswa nezvimwe zvakasikwa zvinhu.
Icho Chikonzero chekuti Organic Matters Anofanirwa Kuve Akazara Akazara
Kuora kwemanyowa efotereza kunotungamira kuzvinhu zviviri zvikuru zvekuchinja mu fetiraiza yehupenyu kuburikidza nehutachiona hutachiona: kuora kwezvinhu zvemanyowa (wedzera huripo huripo nefetiraiza). Kune rimwe divi, iyo organic chinhu chefetiraiza chinoshanduka kubva chakaoma kuenda kune zvakapfava, dhizaini inoshanduka kubva mukusaenzana kuenda kune yunifomu. Mukuita kwemanyowa, inouraya mbeu dzesora, utachiona uye mazhinji emazai ehonye. Nekudaro, inowirirana zvakanyanya nezvinodiwa zvekugadzirwa kwekurima.